Ogaden News Agency (ONA) – Madaafiic Lagu Garaacay Xaafado Kamid Ah Muqdisho.
Madaafiic Lagu Garaacay Xaafado Kamid Ah Muqdisho.
Posted by ONA Admin	/ July 2, 2018
Madaafiic hoobiyeyaal ah oo barqadii shalay ku dhacay xaafad ka tirsan Degmada Wadajir ee gobolka Banaadir una dhow Garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo Xerada ay dagan yihiin ciidamada AMISOM ee Xalane.
Mid kamid Dadka degaanka oo ka warbixiyay madaafiican iyo halka ay ku dheceen ayaa sheegay in tiro saddex Hoobiyeyaal ah ay ku dhaceen xaafad lagu magacaabo Danwadaagaha oo u dhow Xerada Xalane ee degmada Wadajir, waxaana uu sheegay in dhaawacyo ay kasoo gaadheen dad shacab ah oo xiligaa ku sugnaa guryohooda.
Dadka qaar ayaa sheegaya in ay maqlayeen daryanka madaafiicda oo kusoo dhaceysa xaafada ku dhow dhow guryohooda,waxaana ay intaa ku darayaan in xilliga ay maqlayeen daryanka madaafiicda ay u socdeen ka qeybgalka munaasabada 1-da Luulyo oo ka socotay garoonka kubada cagta ee Koonis stadium.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Shan qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen madaafiicdaasi lagu garaacay xaafada Danwadaagaha, waxaana ilaa hada aan war kasoo saarin madaafiicdaasi Hay’adaha Amaanka iyo Maamulka G/Banaadir .